ငလျင်တစ်ခု၏ အင်အား ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲ? « MMWeather Information BLOG
« မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု အခြေအနေများ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR အားလျော့လာပြီ »
By mmweather.ygn, on June 5th, 2012
ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်ရာတွင် ပြင်းအား ရစ်ချစ်တာ စကေး ၄ ရသည် ဆိုပါစို့၊ အကယ်၍ ပြင်းအား ၄ လှုပ်ခတ်မည့် အစား ပြင်းအား ၇ အဆင့်လှုပ်မည်ဆိုလျှင် ပြင်းအား ၇ အဆင့်လှုပ်သည့် ငလျင်သည် ပြင်းအား အဆင့် ၄ ထက် – အဆပေါင်း ၁၀၀၀ ပိုမို ပြင်းထန်ကြောင်း တွက်ချက် ယူနိုင်ပေသည်။
ထိုကဲ့သို့ တွက်ချက်ရန် အောက်ပါ ညီမျှခြင်းကို မိမိ လိုအပ်သည့် ကိန်းဂဏန်းများဖြင့် အစားထိုးတွက်ချက်ရယူနိုင်ပါသည် –
(10**8.7)/(10**5.8) = (5.01*10**9)/(6.31*10**6) = .794*10**3 = 794 OR = 10**(8.7-5.8) = 10**2.9 = 794.328 Another way to get about the same answer without usingacalculator is that since 1 unit of magnitude is 10 times the amplitude onaseismogram and 0.1 unit of magnitude is about 1.3 times the amplitude, we can get,
သို့မဟုတ် အောက်ပါ calculator ကို အသုံးပြု တွက်ချက်နိုင်ပါမည်။
Uncategorized « မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု အခြေအနေများ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR အားလျော့လာပြီ »
« မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု အခြေအနေများ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MAWAR အားလျော့လာပြီ »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum